Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izindaba Zocingo » Uphenyo Olusha Lomtholampilo Lugunyazwe Ukwelashwa Kwesifo I-Parkinson's Early-Stage
NgoJanuwari 13, 2022, iGreen Valley (Shanghai) Pharmaceuticals Co., Ltd. yathola incwadi evela kwa-US Food and Drug Administration (FDA) mayelana nesicelo se-Investigational New Drug (IND) sohlolo lomtholampilo lwe-multi-center phase-II global ye-Oligomannate (imakethwa njenge-“GV-971”), umuthi omusha wenkampani wokwelapha isifo i-Alzheimer's (AD). Incwadi ibonise ukuthi “Ucwaningo Lungase Luqhubeke” ngophenyo lomtholampilo oluhlongozwayo ekwelapheni iziguli ezinesifo i-Parkinson’s (PD) esakhula. Idethi yokuqala yokusebenza kwe-IND nguDisemba 16, 2021.
Njengesifo sesibili esivamile se-neurodeergenerative ngemva kwe-AD, nakuba i-pathogenesis ye-PD ingaziwa kahle, ngokuvamile kukholelwa ukuthi lesi sifo sihlotshaniswa ne-α-synuclein aggregation, neuroinflammation, ukucindezeleka kwe-oxidative, kanye nokungasebenzi kahle kwe-mitochondrial. Eminyakeni yamuva nje, indikimba yobufakazi eyandayo ikhombisile ukuthi i-gut microbiota ihlotshaniswa kakhulu nokuvela nokuthuthuka kwe-PD.
Njengoba iwumuthi wokuqala emhlabeni we-AD oqondise i-axis yobuchopho, i-GV-971 yehlisa ukuvuvukala kwe-peripheral kanye nemaphakathi1 ngokulungisa kabusha i-gut microbiota futhi ivimbele ibhalansi engavamile yama-metabolites atholakala emathunjini. Ngokusekelwe kulokho okutholakele, ithimba labacwaningi e-Green Valley Research Institute lenze ucwaningo lwangaphambili ngomphumela we-GV-971 ku-PD ngokusekelwe endleleni evamile ye-pathological yezifo ze-neurodeergenerative futhi lathola ukuthi umuthi uyakwazi ukulawula i-gut microbiota dysbiosis, ukucindezela i-α-synuclein. ukuhlanganisa kokubili emathunjini nasebuchosheni, kunciphisa i-neuroinflammation, kuvikela ama-neurons e-dopaminergic, futhi kuthuthukise izimpawu zezimoto nezingezona izimoto.
Isivivinyo somtholampilo se-multicenter phase-II somhlaba wonke sizoba amaviki angu-36, okumaphakathi, okungahleliwe, okungaboni kabili, okulawulwa yi-placebo, okulandelwa isikhathi sokunwetshwa kwamalebula avuliwe angama-36. Isivivinyo sihlela ukubhalisa iziguli ze-300 ezine-PD yesigaba sokuqala, futhi sizoqhutshwa ezikhungweni zemitholampilo ze-30 eNyakatho Melika nase-Asia Pacific esifundeni ukuze kuhlolwe ukusebenza nokuphepha kwe-GV-971 ekwelapheni kwe-PD yasekuqaleni.
Ngomhla zi-2 kuNovemba, 2019, Ukuphathwa Kwemikhiqizo Yezokwelapha yase-China kugunyaze i-GV-971 “yokwelashwa kwe-AD emaphakathi kuya kokulingene kanye nokuthuthukisa ukusebenza kwengqondo”, ngemva kokubuyekezwa ngokushesha komuthi. Ukuhlolwa kwesigaba-III se-GV-971 e-China kwenziwa ezibhedlela ze-34 Tier-1 ezweni lonke ezigulini ezingama-818 ezine-AD emaphakathi kuya kokulingene. Imiphumela yocwaningo lwamasonto angu-36 yabonisa ukuthi i-GV-971 yayithuthukise kakhulu ukusebenza kwengqondo ezigulini ze-AD ezimaphakathi kuya kokulingene, futhi yayiphephile futhi ibekezelelwa kahle ngemiphumela engemihle eqhathaniswa ne-placebo1.
Ngo-April 2020, isicelo sohlolo lomtholampilo lwe-multi-center phase-III global lwe-GV-971 sagunyazwa yi-US FDA. Isilingo somhlaba wonke siye sagunyazwa ama-ejensi alawulayo emazweni nasezifundeni ezingu-10, okuhlanganisa , i-Canada, i-China, i-Australia, i-France, i-Czech nezinye. Njengamanje, izikhungo zemitholampilo eziyi-154 kulawa mazwe sezike zasebenza, kwathi iziguli ezingama-949 zahlolwa kwathi ezingama-292 zahlolwa ngokungahleliwe. Ukuqulwa kwecala kuhlelelwe ukuthi kuqedwe ngo-2025, okulandelwa ukuthunyelwa komhlaba wonke kokufakwa kwezidakamizwa ezintsha.
Selokhu yethulwa, i-GV-971 ifakwe ngokulandelana eziqondisweni zomtholampilo zaseShayina zokwelashwa kwezifo. Lokhu kufaka Imihlahlandlela Yokuxilonga Nokwelashwa Kwesifo i-Alzheimer (Ushicilelo luka-2020)2 eshicilelwe yi-National Health Commission General office encoma i-GV-971 yokwelashwa kwe-AD emaphakathi kuya kokulingene, Ukuvumelana Kochwepheshe Ngokuphathwa Kwengqondo Ye-Post-Stroke I-Impairment 20213, I-Expert Consensus on the Nutritional Intervention for Brain Health in Alzheimer's Disease4, Izinkombandlela Zokuxilonga Nokwelashwa Kwezifo Zengqondo (Ushicilelo Lwango-2020)5, Iphepha Elimhlophe Lokwakhiwa Okujwayelekile Kwezikhungo Zokuxilonga Nokwelashwa Kwezinkinga Zokucabanga6, kanye Nemihlahlandlela yaseShayina ye I-Prevention and Treatment of Elderly Dementia eyanyatheliswa yi-Chinese Society of Neurology ngaphansi kwe-Chinese Medical Association ngoDisemba 2021, eklelisa i-GV-971 njengomuthi onconyiwe we-Class-A onobufakazi be-Level-1 bokwelapha i-AD. Ngomhla zi-3 kuZibandlela 2021, i-GV-971 yafakwa ngokusemthethweni ohlwini lwezidakamizwa lwase-China Lwembuyiselo okokuqala ngqa.
Njengesifo se-neurodeergenerative, ukubonakaliswa komtholampilo okuyinhloko kwe-PD kuhlanganisa ukuthuthumela kokuphumula, i-bradykinesia, i-myotonia kanye nokuphazamiseka kwe-postural gait, okungase kuhambisane nezimpawu ezingezona izimoto ezifana nokucindezeleka, ukuqunjelwa kanye nokuphazamiseka kokulala. Ndawonye, ​​anomthelela omubi kwikhwalithi yempilo yeziguli kanye nokusebenza kwansuku zonke. Izibalo zibonisa ukuthi kuneziguli ze-PD ezibalelwa ezigidini eziyi-10 emhlabeni9, okuhlanganisa nezigidi ezi-3 eShayina, futhi izinga lokusabalala kwabantu abangaphezu kweminyaka engama-65 ubudala lingu-1.7%10. Ngenkathi inani labantu emhlabeni wonke elikhulayo likhula, inani leziguli ze-PD lizoqhubeka nokukhula.
Asia Isidakamizwa Impilo Ukuphathwa IKhomishana Yezempilo Kazwelonke i-America esenyakatho Ucwaningo Umphakathi
Ukutholwa Komkhakha Wezokuvakasha kusahamba phambili Naphezu...
virgie cook uthi:
Januwari 20, 2022 ngo-10: 47
Ngiwubufakazi obuphilayo bokuthi ungelapheka ku-Alzheimer's Disease. Kwatholakala ukuthi ngine-Alzheimer's Disease. Ngaba nenyumoniya ngoMashi ka-2020, eyaqala njengomkhuhlane yase iba yinyumoniya. Cishe ngemva kwezinsuku eziyi-10 ngazizwa ngikahle, kodwa ukuphefumula kwami ​​kwakuhlukile, kunzima ukukuchaza, kodwa kwaba sengathi othile ushintshe isisefo esiphuma emaphashini ami. Ngelashwa ngokwemvelo ngokusetshenziswa kwe( World Rehabilitate Clinic, esikhathini esingamaviki angu-3, ​​ngase ngilulama. Ngo-2021 ngaqala ukubonana noDkt Gomez Sims, onguchwepheshe bezokwelapha zangaphakathi namaphaphu ( worldrehabilitateclinic. com).
Januwari 19, 2022 ngo-19: 35